Baro 5 ka mid ah magaalooyinka ugu xiisaha badan Faransiiska | Bezzia
Susana Garcia | 07/04/2021 10:00 | nololeedka, safarka
Faransiisku waa waddan ay ka buuxaan geeso soo jiidasho leh. Magaalooyinkeeda waxay leeyihiin qaab oo waxaan jecel nahay Paris ama Bordeaux, laakiin iyaga intaas dhaaf waa macquul raadso tuulooyin Faransiis ah oo la yaab leh oo neefta kaa qaadi doona. Mararka qaarkood waa inaad ka fogaataa magaalooyinka si aad u hesho meelaha ugu cajaa'ibka badan leh shakhsiyadda ugu badan.
En Faransiiska waxaa jira magaalooyin badan oo qurux badan, laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa shan ka mid ah. Haddii aad jeceshahay booqashooyinka noocan ah, xusuusnow dhammaantood sababtoo ah mid kastaa wuxuu leeyahay wax xiiso leh oo la bixiyo. Marka ku raaxee qodobbada booqashada cusub ee ay tahay inaad ku dhaliso France.
Magaaladaan waxay ku taalaa waaxda lootka waxayna leedahay booqashooyin badan, iyadoo laga dambeeyo Mont Saint-Michel. Aaggan waxaa horey ugu sugnaa joogitaanka Aadanaha ee 'Paleolithic-ka' Sare, maadaama ay leedahay Cueva de las Maravillas, oo ah boholo leh sawirro godad taariikh hore leh. Waa magaalo ku guuleysatay inay leexiso Camino de Santiago oo maanta aad loogu dalxiis tago. Mid ka mid ah booqashooyinka ugu waaweyn ee aaggan waa qalcaddii, oo aad ka arki karto buuraha iyo aragtida magaalada inteeda kale. Inaad u dhaadhacdo aragtida magaalada waad arki kartaa ag mara Camino de la Cruz ama funicular dhulka hoostiisa ah. Qarnigii XNUMXaad Puerta de San Marcial wuxuu fursad u siinayaa meelaha barakaysan iyo barxadda quruxda badan ee qurxinta. Sidoo kale waa inaadan ka maqnaan kaniisadda San Amador laga bilaabo qarnigii XNUMXaad.
Meeshan, oo horeyba loogu noolaa qarnigii XNUMXaad ee dhalashadii Ciise ka hor, waxay bixisaa qalcad aan caadi ahayn oo aan cidna dan ka lahayn. Qalcadan qadiimiga ah ee ku taal koonfur-bari waxay na siisaa soo jiidasho weyn. Way fiicantahay inaad ku booqato xilli hoose si aadan naftaada ugu soo bandhigin dalxiis xad dhaaf ah. The qalcaddu waxay leedahay in ka badan saddex kiilomitir oo gidaar ah leh dibedda iyo daar gudaha ah waxaana ka mid ah lizas, dhul fidsan oo ku wareegsan qalcadda. Qasriga waxaa ku yaal munaarado badan, irdo sida Narbonne Gate, oo inta badan ah irridda laga soo galo, iyo xitaa qalcaddii. Waa inaan sidoo kale aragnaa Basilica-ka Saint-Nazaire, oo leh waxyaabo ka kooban Romanesque laakiin muuqaal gebi ahaanba Gothic ah.
Magaaladaani waxay ku taal Camino de Santiago oo ku taal koonfurta Faransiiska. In Conques waa inaad ku raaxeysataa socodka wanaagsan ee dariiqyadeeda, adoo arkaaya qaab dhismeedka guryahooda, oo leh looxyo alwaax ah iyo saqafka dushiisa. Taallada weyn ee magaalada ayaa ah Qaabka Romanesque Abbey ee Conques taas oo Portico-ka Xukunka Kama-dambaysta ahi ka muuqdo. Dhexdeeda waxaad sidoo kale ku arki kartaa Matxafka Hanti-dhowrka oo leh kaydad. Lama seegi karo meelaha ay ka shaqeeyaan farsamayaqaannada iyo dukaamada yaryar ee tuulada ku yaal.
Tani waa loo tixgeliyey magaalada ugu quruxda badan Alsace. Waxay leedahay qaab-wareeg wareeg ah oo ujeeddooyin ganacsi ah. Qiyaastii shan kiilomitir waxaa jira aragti lagu qiimeeyo qaabkan magaalada. Waa inaad booqataa Rue du Rempant maxaa yeelay waa wadada aan ku arki karno nuxurka dhabta ah ee dhismaha magaalada. Halkan waxaa sidoo kale ku yaal aagga ugu sawirka badan magaalada, guriga Le Pigeonnier oo ku yaal geeska oo kala qaybiya laba waddo. Waa inaan sidoo kale aragnaa meesha loo yaqaan 'Place du Chateau', oo ah fagaaraha ugu muhiimsan ee tuulada leh Fontana de Saint Leon oo ku taal bartamaha.
Tani waa mid kale oo ka mid ah magaalooyinka soo jiidashada leh ee ay tahay inaadan u seegin. Hadaad gasho Rue Grande waxaad kaheleysaa Goobta de la Grande Fontaine oo ahayd barxaddii hore ee suuqa. Gadaashiisa waa Fagaaraha Kaniisadda, oo leh Kaniisadda diinta ee Saint Paul. Aagga koonfureed waxaa ku yaal aragti ku taal qabuuraha, oo ah meesha bixisa aragtida ugu wanaagsan magaalada oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » 5 magaalo oo kuyaala wadanka Faransiiska oo aad jeclaan lahayd inaad ku noolaato
Sifeynta jirka ayaa fure u ah in timahaagu dhaqso u koraan